Abaculi Abachwepheshile - I-Airbnb
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Mariangela
U-Mariangela Ungumbungazi ovelele
Indawo yabaculi nabantu abathanda ukugxila emvelweni futhi bethule. Indlwana itholakala amakhilomitha angu-10 ukusuka e-Noto, amamitha angu-115 ngaphezu kolwandle emagqumeni ase-Hyblaean, azungezwe izindonga zamatshe ezomile kanye nama-mquis ase-Mediterranean. Ukusuka ku-veranda, ungajabulela ukubuka okuyingqayizivele nokumangalisayo kwecebiso laseNingizimu ne-Sicily, noLwandle lwe-Mediterranean ngakwesokudla kanye noLwandle lwase-Ionian ngakwesokunxele.
Ukuze ufinyelele indlwana ukusuka emgwaqeni oyinhloko, hamba ngasemgwaqeni ongcolile cishe amamitha angu-400, ozinzile njengoba ubuqoshwe edwaleni. Situsa imoto encane noma ephakathi nendawo, njenge-Fiat Panda noma i-Fiat 500. Indlwana yakhiwa ngokuvumelana nezimiso eziluhlaza nezingayilimazi imvelo: amapaneli ethu asophahleni anikeza amalambu endlu, izinto zikagesi ezincane, i-Wi-Fi, namapulagi ukuze kuvuselele amafoni eselula nama-laptop. Izinto zikagesi ezinkulu, njengomshini wokuwasha nomshini wokomisa izinwele, zinikwe amandla yi-generator. Indlwana inesiqandisi segesi. Njengoba singaxhunyiwe kugridi kagesi kazwelonke, ukubukeka okuhle kwendlu akuvinjelwe ngezigxobo zokusiza. Nginenja eyodwa enobungane futhi enakekelayo namakati angu-3.
Indlwana ingene ngokuphelele emvelweni. Okwenza le ndawo ibe ekhethekile amandla nobuhle bendawo yaseSicily eyizungezile, ngezindonga zamatshe ezomile, i-food, i-sage kanye nama-rosemary bus, kanye nezihlahla zomnqumo ne-carob. Ukuthula nokuzola kwenza le ndawo ibe yiholide elikahle kulabo abafuna ukuvala nokuvuselela umzimba nomphefumulo wabo.
Indlu yami ikude ngamamitha ambalwa, ngakho-ke nginganikeza usizo nganoma yisiphi isikhathi nganoma iyiphi imfuneko ngenhlonipho enkulu yobumfihlo.
UMariangela Ungumbungazi ovelele